Pelhřimov District, Vysocina Region, Czechia
Indlu encinci enamavili sinombuki zindwendwe onguKateřina
CZ: Indawo yokuhlala ekhethekileyo kwikharavani, kwisiza esinedama. Jabulela ixesha lakho elingqongwe yindalo. Akukho mbane, wifi. Ukusela amanzi yinto eqinisekileyo. Ngaphakathi kwekharavani kukho isifuba somlingo esigcwele imidlalo yebhodi kunye ne-hammock.
EN: Indawo ekhethekileyo yokuhlala kwikharavani, indawo yomlingo enechibi. Lonwabela ixesha lakho olichitha ungqongwe yindalo. Ngaphandle kombane, i-wifi. Amanzi okusela ngaphakathi aqukiwe. Kukho ibhokisi yomlingo enemidlalo emininzi kunye ne-hammock.
Ngaphakathi kwikharavani: ibhedi ephindwe kabini, ibhedi yesofa, ikhitshi, isitovu, itafile yekofu, ilokhari, ithala leencwadi kunye nemidlalo yebhodi. Ngaphandle: ishawa, i-caddy, i-terrace kunye nendawo yokuhlala, indawo yomlilo, ibhedi yemifuno kunye ne-hammock. Ikharavani inokwamkela abantu abadala abayi-4 + umntwana kwibhedi. Ukuba iqela elikhulu lingathanda ukuza, kunokwenzeka ukumisa iintente ngeendleko ezongezelelweyo.
Kummandla okufutshane kukho inqaba iKámen enegadi entle kunye nomboniso wezithuthuthu. I-Chernivtsi - i-cafe enhle egcwele iiwotshi ze-alamu.
Ezinye izinto eziluncedo kwilali iObrataň, idolophu yasePacov.
Isixeko seerekhodi iPelhřimov kunye nesixeko saseHussites Tábor nazo zikufanele ukutyelelwa.
Umbuki zindwendwe ngu- Kateřina